उदय जीएम | चैत २३, २०७६ आइतबार | 0
विश्वमा कोरोना कहर जारी छ । विश्व महाशक्ति अमेरिका यतिबेला कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को केन्द्रबिन्दु बनेको सर्वविदितै छ । इटाली, स्पेन लगायतका देशहरुमा पनि यसले बलियो पकड जमाएको छ । आर्थिक वैभव, विज्ञान र प्रविधिको उच्चतम विकास गरेको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरुलाई कोरोना भाइरसले त्राहिमाम बनाउनुको एउटै कारण देखिएको छ, सरकारको असावधानी र त्यहाँका नागरिकहरुको अनुशासनहीनता अर्थात् अराजकता ।
यता, कोरोना भाइरस पहिलोपटक पहिचान भएको चीनको वुहानमा यसलाई पूर्णतः नियन्त्रणमा लिइसकेको छ, चीनले । ८१ हजार ६ सय ५९ जनामा संक्रमण देखिएको चीनमा कोरोना भाइरसले ३ हजार ३ सय २९ जनाको ज्यानसमेत लियो । त्यसका बावजूद चीनले कोरोनामाथि विजय हासिल गरिसकेको छ र उसले विश्व समुदायमाझ सहयोगी हातहरु फैलाउँदै अगाडि बढिरहेको छ । चीन यतिबेला मानव समुदायको सहयोगका लागि आफ्ना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री र आर्थिकसहित विश्व विचरण गर्दैछ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को औषधि वा भ्याक्सिन तयार नभएको स्थितिमा चीनले के त्यस्तो बुटी फेला पार्यो, जसबाट उसले कोरोना भाइरसमाथि विजय हासिल गर्यो ? त्यो बुटी थियो, लकडाउन अर्थात् मानिस मानिसबीचको सम्पर्कको कडी तोड्न चीनले कडाइका साथ गरेको प्रयास ।
चीनले प्रयोग गरेको बुटी हामीसँग पनि छ । त्यो बुटीको प्रयोग र अभ्यास सरकारले गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन चैत १० गतेदेखि जारी छ । यो अवस्थामा सरकार पनि लकडाउन गरेर सरकार हाइसञ्चोमा बस्नु हुँदैन भने नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई भुल्नु हुँदैन । सरकार र नागरिक दुबैको सत्प्रयासबाट मात्रै कोरोना भाइरससँग सामना गर्न सकिने छ । सरकारले जतिसुकै सतर्कता अपनाए पनि नागरिकले आफ्नो भागमा परेको दायित्व र कर्तव्यलाई अनुशासित भएर निर्वाह गरेनन् भने उसको सतर्कता र प्रयास बालुवाको पानी सावित हुनेछ ।
नेपालमा कोरोना भाइरसले महामारीको रुप धारण नगरे तापनि दोस्रो खुड्किलोमा प्रवेश गरेको छ । नेपालमा पनि संक्रमितबाट नयाँ मानिसमा सरेको पुष्टि भइसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो दोस्रो खुड्किलो पार गर्दै तेस्रो खुड्किलोमा जाने खतराको संकेत हो । चौथो खुड्किलोमा पुग्नु भनेको महामारी हो । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका नै निरीह बनाउने महामारीको रुप नेपालमा आए के होला ? त्यसकारण हामी थप अनुशासित, होशियार र सतर्क बन्न आवश्यक छ । मुख्य कुरा, मानिस मानिसबीचको सम्पर्कको कडी तोड्न हरसम्भव प्रयासका लागि कत्ति पनि ढिलो गर्नु हुँदैन ।
लकडाउनपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द नै छ । आन्तरिक उडान र स्थलमार्गका यातायात सेवा ठप्पै छन् । यसबाहेक हाम्रो मुख्य चुनौति भनेको भारतसँगको सीमा बनेको छ । भारतमा कोरोना भाइरसको प्रकोप उकालो लागिरहेको तथा संक्रमित र मृतकको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसकारण मुख्य नाकाहरु बन्द गरिए तापनि असावधानीकै कारणले नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरु नेपाल प्रवेश गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसबाहेक सीमाक्षेत्रका अत्यन्त विकट चोरबाटो प्रयोग गरेर पनि नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरु नेपाल प्रवेश गरिरहेको भेटिएका छन् । यो हाम्रो लागि अत्यन्त जोखिम बनेको छ र यही चोरबाटो भएर महामारी छिर्ने खतरा छ । सरकारले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको नेपाल–भारत सिमानाबाट मानिसहरुको आवतजावत रोक्न कडाभन्दा कडा कदम चाल्न आवश्यक छ ।
सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै लकडाउनको समयमा ‘चुलो लक्ड’ हुने स्थिति नआओस् । यसमा सरकार चनाखो हुनैपर्छ । जुनसुकै बिरामीले यातायात र उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने अवस्था नरहोस् । यसमा पनि तीनवटै तहका सरकारहरु सचेत हुनैपर्छ । खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारले पहलकदमी लिनैपर्छ । हामी नागरिकसँग दुईवटा विकल्प छन्, मृत्यु रोज्ने कि कष्ट ? हामी त्यति मुर्ख छैनौं, त्यसैले हामी केही समयका लागि कष्ट सहन तयार छौं । चीनले कोरोना भाइरसमाथि विजय हासिल गर्नुमा त्यहाँका अनुशासित नागरिकको उत्तिकै ठूलो भूमिका छ । हाम्रा पूर्खाहरुले त्यसै भनेका होइनन्, अनिकालमा बीउ जोगाउनू, महामारीमा ज्यान जोगाउनू । चीनले प्रयोग गरेको बुटी हामीसँग पनि छ । जो जहाँ छौं, त्यहीं बसौं । मानिस मानिसबीचको सम्पर्कको कडीलाई हरहालतमा तोडौं । यसो गर्न सरकार र आमनागरिकले काँधमा काँध, होस्टेमा हैंसे गरेर मात्रै सम्भव छ ।
विश्वलाई थर्कमान बनाएको कोरोना भाइरसमाथि विजय हासिल गर्ने चीनको बुटी हामीसँगै छ । के त्यो बुटीलाई प्रयोग गर्न हामी तयार छौं ? अवश्य तयार छौं । यसबीचमा सरकारले केही कमजोरी र त्रुटि अवश्य गरेको हुनसक्छ । तर, सरकारको आलोचना गरेर बस्ने समय यो होइन । हामी बाँच्यौं भने सरकार त त्यतिबेला पनि हामीसँगै हुनेछ । सबै हिसावकिताव त्यतिबेलै गरौंला । यतिबेला चाहिँ काँधमा काँध मिलाएर उही ताल, उही सुर र उही लयमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
मानिस र मानिसबीचको सम्पर्कको कडी तोड्न हरहालतमा प्रयास गरौं । त्यसका लागि सबैले आआफ्नो भागमा परेको दुःख र कष्टलाई झेलौं । जहाँ छौं त्यहाँ सामाजिक दूरी कायम गरौं । आवश्यक सावधानी र सतर्कता अपनाउने गरौं । किनकि हामी बरु दुःखकष्ट सहन तयार छौं तर मृत्यु रोज्न तयार छैनौं । हामीमा रोगसँग लड्नसक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता र आत्मबल त छँदैछ सतर्कता र सजगताको खाँचो छ । किनकि हामीलाई मृत्यु अस्वीकार्य छ ।
जेठ ७, २०७७ बुधबार प्रा. मधुसूदन सुवेदी